Dr. Tint Swe's Writings: March 2018
၁။ ဆရာ အသားလှုပ်တာ မျက်ခမ်းလှုပ်တာနဲ့ပတ်သတ်လို့ဖတ်ချင်လို့ link လေးပေးပါလားရှင့်
၂။ ဆရာ ကျွန်မလေ ညာဘက်အောက်မျက်ခမ်းတွေလှုပ်နေတာ ၂ ရက်ရှိပြီဆရာ။ ရောဂါလက္ခဏာ တခုခုကြောင့်များလားဆရာ။ လေတွေဘာတွေဖြတ်တတ်တယ်လဲပြောကြလို့ ဆရာ့ကို မေးကြည့်တာပါဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့်ကျမအသက် ၃၁ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိ။ အခုတလောမျက်နှာကြွက်သားတွေ အဆက်မပြတ်လှုပ်နေလို့။ တခါတလေခေါင်းတခြမ်းကိုက်တယ်။ နှလုံးခုန်မြန်ပြီးဒူးတွေတုန်တယ်။ အဲ့တာလေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာလားဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းရှင့်။
၄။ ကျွန်တော့အမျိုးသမီး အသက် ၄၁နှစ်၊ ဘယ်ဘက် မျက်နှာခြမ်းက တွန့်တွန့်နေတာကြာပါပြီ။ အမျိုးသမီးက ပေါင် ၁၄၀၊ အရပ် ၅ ပေ ၂ လက်မပါ။ ဝပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ Reju Nuron ဆိုတဲ့ Methylcobalamin and Alpha Lipoic Acid Capsules ကို ညအိပ်ရာဝင် သောက်ရပါတယ်။ အကြာကြီးသောက်ဖို့ ညွန်ပါတယ်။ အတော်လေးသက်သာပါတယ်။ ပျောက်တော့ အရှင်းမပျောက်သေးပါ။ ဆက်လက်သောက်သွားရမှာလား။
စိတ်ကနေခိုင်းလို့ လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲ Muscle twitch ကြွက်သားလှုပ်တာကို ဆေးစာနဲ့ Fasciculation ခေါ်တယ်။ မြင်ရတဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားမှာဖြစ်တာနဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်တာလို့ရှိတယ်။
Motor tics ကြွက်သား ဆတ်ကနဲ လှုပ်တာလိုဘဲ Vocal tics အသံမှာဖြစ်တာလဲရှိတယ်။ ကလေး ၂၅% မှာ အနည်းနဲ့အများ ဖြစ်ကြတယ်။ စိတ်ဖိအားများတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာကနေဖြစ်ကြရှာတယ်။ ကြွက်သားလှုတ်တာ ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် စိတ်ကနေမခိုင်းဘဲလှုပ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ အလိုလိုပျောက်သွားမယ်။
နာရီတိုင်းမှာ အရွယ်မရွေးမေးကြတာ၊ အပျိုလည်းပါ၊ မမွေးသေးသူလည်းပါ။ ကလေးမိခင်တွေလည်းပါ။ သွေးဆုံးပြီးသူတွေလည်းပါ၊ ဝေဒနာမျိုးစုံလာ။ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတာပါသိ၊ ကြိုတင်လည်း မြင်မိ၊ ကွက်တိ။
အမျိုးသမီးရောဂါများ မာတိကာ နမူနာ
1. Girl to Woman အရွယ်ရောက် မိန်းကလေး
2. Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁)
3. Menstruation (2) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၂)
4. Menstruation (3) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၃)
5. Menstruation (4) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၄)
6. Menstruation ရာသီလာရင် ဘာဆင်ခြင်ရမလဲ
7. Menstruation and athlete ရာသီလာခြင်းနဲ့ အားကစား
8. Museum of Menstruation ရာသီပြတိုက်
9. Dysmenorrhea ရာသီလာရင် နာ
10. Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ
11. Menstrual Suppression ရာသီရက်ရွေ့နည်း
12. Menstrual mood swings ရာသီလာခြင်းနှင့် စိတ်ပြောင်းလဲမှု
13. PMS (1) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၁)
14. PMS (2) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂)
15. Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁)
16. Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂)
17. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁)
18. Infertility Treatments (2) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၂)
19. IUI and IUTPI ကိုယ်ဝန်ကို အပြင်ကနေရအောင် လုပ်ပေးနည်း (၂) မျိုး
20. Fertomid မျိုးဥကြွေဆေး
21. Clomiphene Brand Names မျိုးဥထွက်ဆေးအမည်များ
22. Egg donation process မျိုးဥလှူဒါန်းခြင်း
23. Amenorrhea ရာသီထိန်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း
24. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁)
25. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂)
26. Infertility and Fallopian Tube Procedures သားအိမ်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း
27. Facts to get pregnant ကိုယ်ဝန်ရအောင် ကြံဆောင်နည်း
28. X-rays and infertility ဓါတ်မှန်နဲ့ ကလေးမရခြင်း
29. ICSI infertility treatment ကလေးရအောင်လုပ်နည်း
30. Contraception and Fertility တားဆေး-တားနည်း ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်
31. Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ
32. Contraceptives Analysis တားဆေး-တားနည်းများ ဆန်းစစ်ချက်များ
33. IUCD ကိုယ်ဝန်တား သားအိမ်ထဲထည့်ထားရတဲ့ ပစ္စည်း
34. Migraine and Contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေး-တားနည်းတွေနဲ့ (မိုင်ဂရင်း)
35. Contraceptive implant ကိုယ်ဝန်တား အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ပစ္စည်း
36. Contraceptives and breastfeeding ကိုယ်ဝန်တားဆေးများနှင့် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
37. Birth Control and Heart Disease နှလုံးရောဂါနဲ့ တားဆေး
38. Contraceptive pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ
39. Minipill ကိုယ်ဝန်တား အသေးစားဆေးပြား
40. Exluton ကိုယ်ဝန်တား အသေးစားဆေးပြား
41. Birth Control pills 25 FAQs ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး အမေး-အဖြေ ၂၅ ခု
42. Spermicide သုတ်ပိုးသတ်ဆေး
43. Birth Control Methods ကိုယ်ဝန်တားနည်း-တားဆေး ဘယ်လိုရွေးမလည်း
ဤသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ တရားအဆီအနှစ်များအားလုံး အကျုံးဝင်သော သင်ရိုးမာတိကာ အစီအစဉ်တရပ်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကြီးသည် ယနေ့တိုင်အောင်ပင် တိုးတက်စည်ကား ပြန့်ပွါးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေသွေးရုပ်စုံကာတွန်းမှာသာမကပါ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ပိဋကတ်တော် မြန်မာပြန်မှာလည်း သတ်ပုံမှန်တွေအတိုင်းသာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အစီအစဉ်တစ်ရပ်လို့ မရေးပါ။
ရွာတရွာတွင် မောင်ကောက်နှင့် မောင်ဖြောင့် ဆိုသူတို့ရှိကြ၏။ တနေ့သောအခါ မောင်ကောက်သည့့်
ဇာတ်လမ်းအဆုံးတွင် မောင်ဖြောင့်သည် မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်အတိုင်းသာရေးသား၍ မောင်ကောက်သည် ရွာတစ်ရွာတွင်၊ တစ်နေ့သောအခါ ပေါ်လစီသတ်ပုံနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါ လိုက်သွားလေတော့သတည်း။ Smile!
တိတ်ဆိတ်သော နွေဦးည သန်းခေါင်ယံတွင် သာအေးသည် ပူအိုက်ကာ နိုးလာပြီး တစုံတခုကို စူးစိုက်တွေးနေနမိသည်။
သာအေးတွေးနေသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုလို့ ရေးနေကြတာ မှားတယ်ဟူ၍ဖြစ်၏။ Smile!
အခုတော့ လူထုတိုက်ထုတ်စာတွေက့့
၁။ အသက် ၃၈ မိန်းကလေးပါ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် လည်ပင်းခွဲထားပါတယ်ဆရာ အရင်က ကယ်စီယမ်ဆေး သောက်ရတာ တနေ့ခြောက်လုံးပေးထားပါတယ် ပုံမှန်သောက်ပါတယ် ထိုးဆေးကမထိုးရတာ လေးလရှိနေပါပြီ အခုခရီးထွက်နေချိန်မှာ လက်တွေကပ်ချင်နေပါတယ် သောက်ဆေးကတော့ပါလာပါတယ် ထိုးဆေးပါမလာဘူးဆရာ အရေးပေါ်ဘာလုပ်သင့်လဲ အကြံလေးပေးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခရီးကအညာဘက်ပါဆရာ ကယ်ဆီယမ် နည်းတဲ့လက္ခဏာက ဘယ်လိုတွေလဲဆရာ ဘာတွေစားရင်ပြန်ပြည့်မလဲ ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆရာ ဆေးစစ်တာတော့ ကယ်ဆီယမ်နည်းတယ် ပြောပါတယ် အုန်းရည်နဲ့ ထိုးဆေးမှာပါတဲ့ ဂလူးကို့စ် တူပါသလားဆရာ လောလောဆယ် ထိုးဆေးမပါလာလို့ပါ သောက်လို့ရပါသလား
၂။ သမီးအမေက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂ဝ လောက်က လည်ပင်းကြီး (ညာဘက်) အတွက် ခွဲခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အခု အနှစ် ၂ဝ ရောက်တော့ နောက်တခါ ပြန်ဖြစ်တာနဲ့ ထပ်ခွဲရပါတယ်။ ၂ လ နီးပါး အရောက်လည်းကျရော မျက်နှာတွေ ခြေတွေ လက်တွေ အမ်းလာပါတယ်။ သွေးလည်း တိုးပြီး သွေးပေါင်ချိန်က မမှန်ပါဘူး။ လူကတော့ ဝလာတယ် ထင်နေတာ။ နောက်တော့ ခေါင်းပါ မထူနိုင်လို့ နယ်မှာ ပြနေကျ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတော့ ကယ်ဆီယမ် ချို့တဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ နယ်ဆရာဝန်က ရန်ကုန်က သူခွဲခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကို မြန်မြန်ပြပါဆိုတာနဲ့ ပြတော့ ဆရာကြီးက အာရုံကြော ရောင်တာ လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ နယ်ဆရာဝန်က အဆင်မသင့်ရင် နှလုံးသွေး ရပ်တတ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးကတော့ စိတ်ပူစရာ မရှိဘူးဆိုပြီး ဆေးခန်းကို ၃ ရက်တခါ ချိန်းပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ် နဲ့ ဂလူးကို့ကို ၃ ရက်ခြား တခါ ထိုးပြီး သောက်ဆေးကတော့ ဆေးဖြူ ၂ လေး တလုံးပဲ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးခန်းချိန်းတဲ့ နေ့တိုင်း ကယ်ဆီယမ် ထိုးရင် သက်သာပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက မေးတော့လည်း စကားအရမ်းနည်းတော့ ဖြေဘူးဆရာ။ ဂဃနဏပေါ့။ ကောင်းသွားမှာပါ တခွန်းပဲ ပြောတယ်။ နယ်က ဆရာဝန်ပြောလိုက်တော့ စိတ်တော်တော် ပူပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာရယ်။ ကယ်ဆီယမ် ကို အဲလို ဘယ်အချိန်ထိ ထိုးနေရမှာလဲ၊ ကယ်ဆီယမ် ထိုးရင် ရမဲ့ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကိုရော၊ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Goitre လည်ပင်ကြီးကို ခွဲစဉ်က တွဲရှိနေတဲ့ Parathyroid glands အိတ်ကလေးတွေ ပါသွားလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ အိတ်တွေက တဖက်မှာ အထက်အောက် တလုံးစီရှိတော့ ပဌမခွဲတုံးက နှစ်လုံး ပါသွားပေမဲ့ ကျန်နှစ်လုံးက အလုပ်လုပ်ပေးနေခဲ့မယ်။ နောက်တခါ အကုန်ပါသွားတော့ အခုလိုဖြစ်တာ နေမယ်လို့ မှန်းကြည့်ရပါတယ်။
အိတ်ကလေးတွေဆိုတာ လည်ပင်းကြီး အကြိတ်လိုဘဲ ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးတယ်။ အမျိုးအစားတော့ Parathyroid hormone (PTH) ခေါ်တယ်။ နာမယ်ထက် အရေးကြီးတာက ဟော်မုန်းရဲ့သတ္တိ။ Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) အလုပ်ကို ထိန်းပေတယ်။ အလားတူ Phosphorus (ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်) နဲ့ Vitamin D (ဗီတာမင် ဒီ) တွေကိုပါ သက်ရောက် စေတယ်။ ရောဂါရရင် Blood calcium နည်းလာပြီး၊ Phosphorus levels မြင့်လာမယ်။ ခွဲလို့ ထိခိုက်မိလို့ မဟုတ်ဘဲ၊ Magnesium နည်းရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Metabolic alkalosis ဖြစ်ရင်လဲ ဒီလို ဖြစ်မယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ပါးစပ်နား တဝှိုက်မှာ အပ်နဲ့ ထိုးသလို စူးပြီးကျင်ဆာ အစောဆုံး လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ အန်ချင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်နာ၊ လက်သည်း-ခြေသည်း ကျွတ်ဆတ်၊ ဆံပင်ခြောက်၊ အရေပြားခြောက်၊ ကြွက်သားနာ-ကြွက်တက်၊ လက်ချောင်း-ခြေချောင်းကျင်၊ သွေးခြည်ဥထွက်၊ ရာသီလာရင် ကိုက်ခဲ၊ မှိုရောဂါဝင်၊ ကလေးဆိုရင် သွားပေါက်နှေးမယ်၊ သွား-ကြွေလွှာ အားနည်းစေမယ်။
ဆိုးတဲ့ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ Seizures အတက်ရောဂါ၊ Larynx spasms ရုတ်တရက် လေပြွန် တုံခါ-နာကျင်တာ၊ အာရုံစိုက်နည်းတာ။ Latent tetany ကြွက်တက်ခြင်နေတာကို Trousseau sign သွေးဖိအားတိုင်း ကရိယာနဲ့ အထက်သွေးချိန် အပေါ်မှာ ထားကြည့်ရင် အဲဒီလက်မှာ တကယ်ကြွက်တက်လာတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ကိုင် တူနဲ့တူတဲ့ ခေါက်တံနဲ့ စမ်းရင် တုံ့ပြန်မှုက ဖြစ်နေကြထက် ပိုကဲနေတာ တွေ့မယ်။
အရေးပေါ် လက္ခဏာတွေကတော့ Laryngospasm လေပြွန် ကြွက်သားတွေ ရုတ်တရက်၊ အချိန်မရွေး ဒုက္ခပေးတာ (တခြားအကြောင်းတွေကနေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်) နဲ့ Cardiac arrhythmias နှလုံးခုန် မမှန်တာ။
ကုသရာမှာ အဓိက Calcium နဲ့ Vitamin D တွေကို အပိုဆောင်းပေးရတယ်။ Vitamin D3 က ပိုကောင်းတယ်။ အရေးပေါ် ဖြစ်ချိန်မှာ Calcium gluconate (IV) သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးရမယ်။ နှလုံးကို စောင်ကြည့် နေရမယ်။ နှလုံးခုန်တာက စည်းချက်ဝါးချက်ကျကျ ခုန်နေမှ ကောင်းတယ်။ သက်သာချိန်မှာ စားဆေး ပေးမယ်။ ဆေးကုရတာက တသက်လုံးပါ။
• ဆေးက သွေးကြောအပြင်ရောက်ရင် အလွန်ကို နာတယ်။ အကြောဆေး ခဏခဏထိုးရသူတွေမှာ Phlebitis သွေးပြန်ကြောရောင်တာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
သွေးတိုးများရင်၊ ကိုလက်စထောများရင် သပ်သပ် ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် မတိုးတာ ကောင်းမယ်။ ရောဂါ အကြောင်း စုံစေ့အောင် ရေးလိုက်တာမို့ အစိုးရိမ် မပိုစေလိုပါ။ အဆိုးဆုံးအထိ ပါအောင်အထိ ရေးရတာမို့ပါ။
Hypothyroidism လည်ပင်းကြီး ခွဲပြီးသည့်နောက် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hypothyroidism.html
Complications of Thyroid Surgery လည်ပင်းကြီးရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/complications-of-thyroid-surgery.html
Hypoparathyroidism လည်ပင်ကြီး ခွဲပြီးသည့်နောက် (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hypoparathyroidism.html
Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/calcium.html
Calcium အမျိုးသမီး၊ ကလေးနဲ့ ကယ်လ်စီယမ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/calcium.html
အိပ်ရာထ ကွန်မင့်တွေဖတ်တယ်။ မအိပ်ခင်ကတင်ထားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးနဲ့ ပင်နီခေတ်အောက်တွေမှာ ဖတ်ရတယ်။ ကျိုင်းတုံက သစ်တပင်တောင်လို့ရေးသူနဲ့ သစ်တစ်ပင်တောင်လို့ရေးသူ။
အဲဒီကို မရောက်ဖူးသေးပါ။ မနေ့ကလည်း မုံရွာနားက ဗောဓိတထောင်ဘုရားပို့စ်တခုမှာ တယောက်က ဗောဓိတစ်ထောင် လုပ်ထားတာတွေ့တယ်။ အဲဒီကိုတော့ တည်ထောင်ကစကတည်းက ရောက်ဖူးတယ်။ တဆူ။ နှစ်ဆူ။ အဆူတရာ။ နှစ်ရာ။
ရန်ကုန်ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို ၄-၅ ခေါက်ရောက်ခဲ့တယ်။ တလောက ဗိုလ်တစ်ထောင်လို့ရေးတာတခု ဖတ်ရတယ်။
ပင်နီလက်ဆောင်ပေးချင်သူက တစ်ခေါက်တော့လာပါတဲ့။ တခေါက်မက လာချင်တယ်။ တစ်ခေါက်တော့မလာလို့ ပြန်ရေးမိတယ်။ တစ်ခေါက်ဆိုရင် သစ်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ရသေ့ဖြစ်သွားမယ်။
အဲလိုပဲ စာအုပ်အဖုံး၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ သတ်ပုံမှန်နဲ့ရေးထားတာကို ပို့စ်တင်သူတွေက ပေါ်လစီသတ်ပုံနဲ့ရေးကြတယ်။ ဆိုးတယ်။ မြန်မာစာ အရောင်ဆိုးခံထားရတာ။ တရားကျစရာကောင်းတယ်။
အကယ်ဒမီထက်လည်း စောတယ်။ သမတမဲပေးပွဲထက်လည်း စောတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တော့ ပိတောက်ပွင့်မလဲ သတင်းကို စောင့်နေတာ။ အခုပဲတွေ့တယ်။ မန္တလေးကလို့တော့ ထင်တယ်။ သေချာ မသိပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ပိတောက်ဝါတွေ ပွင့်နေပြီတဲ့။ မုတ်သုန်ရာသီဥတုတော့ အတူတူရှိပါရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမှာ ဘယ်နေရာမှာမှ ပိတောက်ပင်မရှိပါ။ ကာလကတ္တားဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မြန်မာပြည်ကနေ တကူးတကယူပြီး စိုက်ထားတဲ့ ပိတောက်ပင် ရှိတယ်။ ကိုင်းတကိုင်း ချိုးယူလာသေးတာ နေတဲ့တိုင်းပြည် ပြောင်းရပြန်လို့ မစိုက်ဖြစ်လိုက်ပါ။
မွှေးလှတဲ့ ပိတောက် မြန်မာပြည်က မပျောက်ပါစေနဲ့။
JAN 13TH, 12:12PM
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ချောင်းစို ချောင်းချောက်အကြောင်းသိချင်လို့ပါဆရာ ဖြေကြားပေးပါနော်ဆရာ
JAN 13TH, 1:51PM
MAR 10TH, 11:32PM
မင်္ဂလာပါ ဆရာ သမီးက ၂၅နှစ်ပါ မျက်မှန် တော့မတပ်ရသေးပါဘူး မျက်ခမ်းအောက်ကအမြဲတမ်းလှုပ်နေလို့ မျက်လုံးအနာလားသိချင်လို့ပါဆရာ
ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ (မေးနည်းစည်းကမ်းပို့ပေးထားသူက လိုအပ်ချက်အစုံမပြောလို့ ဘလော့ကိုညွှန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။)
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၅ပါ အိမ်ထောင်ကျတာ ၁နှစ်ရှိပါပြီ OK တားဆေးကိုသောက်နေပါတယ် သူများတွေက Marvelon 28 က ဆေးရပ်လိုက်တာနဲ့ခလေးတန်းရတယ် Ok က ကြာတယ်လို့ ပြောလို့ပါဆရာ နောက်တနှစ်လောက်ဆို ခလေးယူချင်လို့ပါ့ Ok သောက်သင့်မသောက်သင့်ပြောပြပေးပါဆရာ
တယောက်တည်းကမေးတာ။ ကျား-မ-အသက် စတာ ဘာမှမပြော။ မေးနည်းစည်းကမ်းပို့တော့ အသက်နဲ့ အမျိုးသမီးလို့ ပြောတယ်။ တတိယအကြိမ်မေးတော့ အိမ်ထောင်ကျတာပြောတယ်။ ကလေးလိုချင်တာပါပြီး ရာသီ မပြော။
တားဆေး စားဆေး ၂ မျိုးက အဲလိုဖြစ်တယ်လို့ အိုဂျီကပြောတာ ဟုတ်ပုံမရ။ တားဆေးတားနည်း အားလုံး ခဏခဏ (ခဏခဏ) တင်ထားတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ တယောက်နဲ့တယောက် ဟော်မုန်းရှိကြတာ မတူကြ။ တယောက်တည်းမှာလည်း အိမ်ထောင်မကျမီ၊ ကျပြီး။ ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်၊ ကလေးမွေးပြီးချိန်၊ တယောက်ပြီး နောက်တယောက် မွေးပြီးချိန်တွေမှာ ဟော်မုန်းရှိတာ မတူကြ။ ဟော်မုန်းပါတားဆေးတွေကနေ သက်ရောက်မှုက မတူကြ။ တားဆေးတွေက တခုနဲ့တခု မကွာလှ။ ကွာခြားတာက လူတွေ။
ချောင်းစိုမှားတယ်။ ချောင်းချောက် မှားတယ်။ ချောင်းဆိုးလို့ ရေးရတယ်။ ချောင်းခြောက်လို့ ရေးရတယ်။
ရဲကြပ်ကြီးတယောက်ဟာ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံကိုရောက်တော့ လက်ပတ်နာရီကြည့်ပြီ့း့
လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်နားမှာတော့ လူတယောက်ရပ်နေတာကို တွေ့ရတယ့့်
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတယောက်ကို စောင့်နေတယ့့်
ထိုသူ စီးကရက် နောက်တလိပ် ထပ်ညှိပြီ့း့
လူတယောက် သုတ်သုတ်ပြာပြာ ဝင်လာတယ့့်
တခုခုစားကြပြီး အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြရအောင့့်
၂ဝ-၁-၁၉၇၃ နေ့ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ်
၁။ ဘူးလား ဖူးလားဗျ ဆရာ စားဖူးသလား စားဖူးတယ် မစားဖူးဘူး စားမလား မစားဘူး သုံးဖူးသလား သုံးဖူးတယ် မသုံးဖူးဘူး သုံးမလား မသုံးဘူး ရောက်ဖူးသလား ရောက်ဖူးတယ် မရောက်ဖူးဘူး
၂။ ဆရာခင်ဗျာ။ ဘူးသီး၊ ဗူးသီး၊ နှာဘူး၊ နှာဗူး၊ မည်သည်က အမှန် ကျေးဇူးပြု၍ အများသိရန် ဖော်ပြပေးပါခင်ဗျား။
၃။ ဆရာ နို့ဆီဗူးလား နို့ဆီဘူးလားသိပါရစေရှင့်။
၄။ အတွေ့အကြုံဆိုဖူးလို့ မှတ်ထားတာ ဘူးက အငြင်းဝါကျမှာသုံးတာလို့ မှတ်ထားတာ
၅။ ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးလို့ ဘူးအစား ဖူးကိုသုံးရမှာမို့လားဆရာ။ စားဖူးတယ်၊ သွားဖူးတယ်၊ ဖြစ်ဖူးတယ်။
၆။ ဆရာရေးတဲ့ ဝန်ကြီးဆိုပြီး အကြာကြီးခေါ်ခံရဘူးတယ်။ အဲဒီ့မှာ ဖူးသုံးရမှာလား၊ ဘူးသုံးတာက အမှန်လား။
၇။ ဆရာခင်ဗျာ ဒုတိယတန်းသင်္ချာထဲမှ နို့ဆီဘူး သတ်ပုံ ခွဲခြားပေးပါခဗျား။
ပို့ပေးတဲ့ ဒုတိယတန်းသင်္ချာထဲမှာ နို့ဆီဗူးရေးလိုက်၊ နို့ဆီဘူးရေးလိုက် တွေ့ရတယ်။ နို့ဆီဗူးက မှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ မကြာမကြပြောလာကြတယ်။ အငြင်းသဘောမှာသာ ဘူးသုံးရပါတယ်တဲ့။ မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာလုပ်တာတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ အားနည်းချက်တွေတွေ့မိပါတယ်။ ရေတွက်လို့ရတာကို တစ်ဆိုတာ အကုန်မမှန်ပါ။ မ နောက်က ဘဲ လိုက်လည်း နေရာတိုင်းမှာ မမှန်ပါ။ ငြင်းဆိုတာကို ဘူးလည်း အပြည့်အစုံ မမှန်ပါ။ ဥပမာ ကြားဘူးနားဝ အငြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားဖူးဘူးသည် အငြင်းမဟုတ်ပါ။
အခုသတ်ပုံစာအုပ်မှာ ဘူးရွက်တဲ့။ ဗူးကို ကလေးဗူးမှုတ်တာတခုတည်းလို့ လုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဗူးရွက်လို့ ရေးတယ်။ ရေဗူးလို့ ရေးတယ်။ ဗူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲလို့သာရေးရတယ်။ ဘူးခံပြီး ငြင်းတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ဗူးခါးရေနဲ့ ကြမ်းကြားလေကို ဘယ်လိုရေးရေး အေးပါတယ်။ ဗူးဆို ဖရုံမသီးတာနေရာတိုင်းမှာတော့ မကောင်းပါ။
မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာတွေ အသုံးများတာတော့ မှန်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာတော့ တရားသေမှတ်မရပါ။ မြန်မာစာကို ယူနီဖေါင်းဝတ်ပေးလို့မရပါ။ မူကွဲရှိတယ်။
၁။ လင်းတ၊ ဠင်းတ ဘယ်ဟာမှန်။ ဇီဇာကြောင်ဆိုတာ သတ်ပုံကျမ်းမှာ ရှိ၊ မရှိ။
၂။ တချို့ မြန်မာစာအုပ်တွေမှာ လင်းတ (ငှက်အမည်)၊ ဠင်းတ (ငှက်အမည်) နှစ်မျိုး တွေ့နေရပါ၍ ဘယ်အရာကသာ သတ်ပုံအမှန် ဖြစ်ပါလဲဆရာ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ငယ်ငယ်က ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကုဋေ ၈၀ သူဌေးသား ကဗျာလေး တွေ့ရင် တင်ပေးပါ ရှာမတွေ့ပဲ အကုန်မရလို့ပါ။ ရှေးသရောအခါ ပြည်ဗာရာဝယ် ကုဋေကြွယ်သား သူဌေးသားလျင့့့့် ကောင်သေလင်းတ ကျ၏တည်း။
အရင်ထုတ်တွေရော နောက်ထုတ်တွေမှာပါ ဠကို ထည့်မထားပါ။ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်နဲ့ ကာဠုဒါယီအမတ်သာ တွေ့တယ်။ သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်းမှာ လင်းတလို့ရေးပါတယ်။ စာရေးသူတွေတချို့က ဠင်းတလို့လည်းရေးကြတယ်။ ဇီဇာကြောင်လို့ သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်းတွေမှာ မတွေ့သေးပါ။ သတ်ပုံစာအုပ်သစ်မှာ ပါတယ်။
လင်းလေး (ကြိုးတချောင်းတည်းရှိ မြားပစ်သောလေး)
• မောင်ငယ်ရင်သွေး နာဘိသေးလော့၊
• ရှေးသရောအခါ ပြည်ဗာရာဝယ်၊
• ကုဋေကြွယ်သား သူဋ္ဌေးအားလျှင်၊
• သားတယောက်ဖြစ် ချစ်၍တစေ အိမ်မှာနေ၍၊
• စာပေမကျ မိဘစုတေ့၊ ခန္ဓာရွေ့သော်၊
• အရှေ့အနောက် တောင်မြောက်ဘယ်မှာ မသိပါငြား၊
• သူဋ္ဌေးသားသည် သိုထားမတတ် အရပ်ရပ်၌၊
• နှံအပ်ဥစ္စာ ရှိသည့်ငှာကို၊
• များစွာကျွန်ပေါင်း မကောင်းခိုးသူ ယူ၍ပြေးရှောင်း၊ အိမ်ကိုရောင်း၍၊
• ထောင်းထောင်းကြေလျက် ခွက်လက်ဆွဲကာ တောင်းစားပါလည်း၊
• နင်သာလူမိုက် ဒုစရိုက်ဟု ရိုက်ပုတ်လိုက်ကြ၊
• ရွာမှထွက်လေ၊ တောမှာသေသည်၊
• ကောင်သေလင်းတ ကျ၏တည်း။ ။ (ဆားတုံ ဆရာတော်)
၁။ ဘဝဆိုတာ အစဉ်ပြေသလို လှော်ခတ်သွားလာနေကြရတာပါ
အဆင်ပြေသလိုလို့ ရေးရတယ်။ အစဉ်ပြေလို့ပြောရင် စကားမပီရာကျတယ်။ ဆောရီး။
၂။ မြန်မာစားစရာလေးတွေရတော့ အစဉ်ပြေတာပေါ့ မြန်မာတွေက မြန်မာ့ရိုးရာ အတို့အမြုံ့လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းကြမှာပေါ့နော်
အဆင်ပြေလို့ ရေးရတယ်။ အစဉ်ပြေလို့ရေးနေကြသူတွေ အတော်များတယ်။ အစဉ်ဆိုတာ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အစဉ်သဖြင့်မှာသာ သုံးရတယ်။ အစဉ်ပြေလို့ပြောရင် စကားမပီရာကျတယ်။ ဆောရီး။ အတို့အမြှုပ်လို့ ရေးရတယ်။ လက်ဖက်မြုံ့နေသည်၊ စားမြုံ့ပြန်သည်လို့ရေးရတယ်။
စဉ် = ကြိယာ = စီတန်းသည်၊
စဉ် = သမ္ဗန္ဓ = ပြုဆဲ ဖြစ်ဆဲကိုပြသောစကားလုံး၊
အစဉ်မသင့် (အစီအစဉ် မသင့်၊ အဆင်မသင့် မဟုတ်)
ဆင်ကမှာ ကျောက်ဆည် နာမည်ကြီးတယ်
ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မည်း မကြည့်ဝံ့
နာဠာဂီရိဆင်ကြီးနဲ့ ဆန္ဒန်ဆင်မင်းတို့ကိုတော့ စင်မင်းလို့ မရေးကြကောင်းပါရဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ အစဉ်သဖြင့် အဆင်ပြေကြပါစေ။
အခုစာရေးနေချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်တဦး ပြည်တွင်းကိုရောက်နေတယ်။ သူအလည်ပြန်နိုင်တာ ဘယ်နှစ်ခေါက်လဲ မသိ။ နော်ဝေသည် ယူအက်စ်အေထက်နီး၏။ ယင်းမာပင်သည် ပုလဲထက်နီး၏။ ဒေလီသည် အင်ဒီယာနာထက်နီး၏။
ဆေးကျောင်းသူငယ်ချင်း အမျိုးသမီးဆရာဝန် နှစ်ယောက်လည်း အလည်ပြန်နေကြတယ်။ သူတို့ကလည်း တယောက် တိုင်းပြည်တခုစီမှာနေကြတာ။ ဟောင်ကောင်နှင့် နယူးယောက်တို့သည် အင်ဒီယာနာပုလစ်ထက် နီးကြ၏။
လာလိုလျှင် အနီးလေးလို့ရေးတာတွေ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖတ်ဖူးထားပြီးဖြစ်။ ခရီးမိုင်သည် အတားအဆီးတမျိုးသာဖြစ်၏။
ဓါးတောင်ကိုသော်လည်းကောင်း မီးပင်လယ်ကိုသော်လည်းကောင်း တက်ကျော်ဖြတ်ရသူတွေ တကယ်ပင်ရှိ၏။
အကျွန်ုပ်အကယ် အလည်ပြန်ဖြစ်ပါက အချိန်ဗီဇာကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီး အခြေအနေပြည်ဝင်ခွင့်ပါရလို့ဖြစ်၏။
၁။ လုပ်ဖော်လား လုပ်ဘော်လား ဆရာ မရှင်းလို့။
၂။ ဆရာ အကောင်းဆုံးအဘော်ဖြစ်သည်လို့သုံးတာ အမှန်လားဆရာ။ အဖော် အဘော် ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲဆရာ။
၃။ အဖော်ကိုလဲ အဘော်လို့ရေးထားတယ်နော် ဆရာ အဲ့ဒါလေးလဲအချိန်ရရင် ရှင်းပြပေးပါအုံးဆရာ။
၄။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ လုပ်ဘော်ကိုင်ဖက်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၊ လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်၊ ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ သိပါရစေရှင့်။
၅။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ အပျိုဘော်ဝင်လို့ သုံးထားတာတွေ့တယ်ဆရာ။ တော်တော်များများနေရာတွေမှာ အပျိုဖော်ဝင်ဆိုပြီး သုံးတတ်ကြတယ်။ ဘယ်ဟာက အမှန်လည်းပြောပြပေးပါဆရာ။
အပျိုဘော်ဝင်ကသာ မှန်တယ်။ အပျိုလေးတယောက် သူ့အဖေါ်နဲ့ ဈေးဝယ်သွားတယ်လို့ ရေးရင်မှန်တယ်။ ကန်တော့ပါ။ ဒီခေတ်မှာ ကွန်ဒွမ်ကို အဖေါ်လို့ပြောနေကြတယ်။ ကန်တော့ပါ။ ဖော်နဲ့ ဖေါ်လည်း အတူတူသာဖြစ်တယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျွန်မညီမက အသက် ၂၁ပါ ဆရာ အူအတက်ခွဲထားတာ ၂ လရှိပါပြီ အခု ဗိုက်ကနည်းနည်းပြန်အောင့်ပြီး နေ့တိုင်းအန်ပါတယ်ဆရာ စိုးရိမ်ရပါသလားရှင် အူအတက်ခွဲထားတာက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာခွဲထားတာပါဆရာ ကျွန်မတို့ကနယ်ကိုပြန်သွားတော့ ခုလိုအန်နေတာကို နယ်ကဆရာဝန်နဲ့ပြပေမဲ့လည်း နေ့တိုင်းအန်နေတာ ဆယ်ရက်လောက်ရှိပါပြီဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာရှင့်။
၂။ ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့်အစ်မ ၄ဝ နှစ်၊့့ မြို့၊ ရန်ကုန်သည် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်တွင် အူမကြီးနဲ့အစာအိမ်ကြားတွင် အနာဖြစ် ပြည်တည်၍ အူဖြတ်၍ဆက်ထားရပါသည်။ ခုအခါ မကြာခဏ ဗိုက်ထဲတွင် နာကျင်ခြင်း (အူဆက်ထားသည့် နေရာဟုထင်ပါသည်) အားနည်းခြင်း၊ ဝက်ခြံများပေါက်လာခြင်း ဖြစ်နေပါ၍ သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆေးများ ညွန်ကြားပေးရန် အစ်မကိုယ်စား ပန်ကြားပါသည်။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးက 5.6.2014 နေ့က ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ အခု တလကျော်တာတောင် ဗိုက်သားတွေ နာနေတုန်းပါဘဲ။ ချုပ်ရိုးက ကောင်းပါတယ်။ လုံးဝမနာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချုပ်ရိုးအောက်ဗိုက်ထဲမှာ မာမာ အမြှောင်းလိုက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ချုပ်ရိုးအပေါ်ဘက်နားက ဗိုက်သားတွေကလဲ အရမ်းနာနေတုန်းပါ။ ဘယ်လိုကုသမှုမျိုး လိုအပ်ပါသလဲ ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။
၄။ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးသည် ကလေးနှစ်ကြိမ် မွေးဖူးပါသည်။ နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါစလုံး ဗိုက်ခွဲ၍ မွေးခြင်းဖြစ်၍ နောက်ထပ် ကလေးလိုချင်လျှင် နောက်ထပ် ဗိုက်ခွဲ၍ မွေးဖွားလို့ရနိုင်ပါသေးလား သိပါရစေခင်ဗျား။ ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အရင်ခွဲမွေးရတဲ့ အကြောင်းက သူက အရမ်းပျော့ပြီးကြောက်တတ်လို့ မေ့ဆေးပေး၍ ဗိုက်ခွဲမွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ခါခွဲဖူးတဲ့အတွက် နောက်ထပ် ဗိုက်ခွဲမွေးလို့ ရပါသေးလား သိပါရစေ။
မေးခွန်း (၁) ဘာကြောင့်လဲ မသိနိုင်သေး။ ခွဲစိတ်တာကနေ အထဲမှာ တွယ်ကပ်မှု ဖြစ်သလား စဉ်းစားရ။ ဟုတ် မဟုတ် ဆရာက မသိနိုင်။
မေးခွန်း (၂) အတွက် ဝက်ခြံကတော့ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်စဉ်းစားရမယ်။ ဟော်မုန်းပါဆေးတွေ သောက်နေသလား မသိရပါ။ အိမ်ထောင်ရေးစတာ မသိရပါ။
မေးခွန်း (၄) အတွက် နောက်တခါလည်းခွဲရ-မခွဲရဆိုတာ အရင်ခွဲမွေးရတဲ့ အကြောင်းတရားအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တခါခွဲမွေးဘူးလို့ အမြဲတန်းခွဲရတယ်လို့ မရှိပါ။ အရိုးကွင်းကျဉ်းတမျိုးကတော့ အမြဲခွဲရတတ်တယ်။ ကျန်အကြောင်းတွေက ကိုယ်ဝန်တခုချင်းအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တခုရှိတာက ဆေးရုံ-ဆေးခန်းတွေက သိပ်မစောင့်ချင်တာတို့၊ ငွေကျသင့်စေချင်တာတို့နဲ့ ခပ်လွယ်လွယ်ခွဲတာလဲ နေရာတကာမှာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့ ဆေးခန်းသေးသေးလေးမှာ အရင်ခွဲမွေးထားသူတွေကို ရိုးရိုးမွေးမေးထားတာ ၃-၄ ယောက်ရှိပြီ။ အများအားဖြင့် ဗိုက်ခွဲပြီးကလေးမွေးတာကို ၃ ကြိမ်အထိလုပ်ပါတယ်။ ဒိနောက်တော့ သားကြောဖြတ်ချင်ရင် တခါတည်း ဖြတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။
မေးခွန်း အားလုံးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသနည်းဟာ ရောဂါတွေကို ပျောက်စေ၊ သက်သာစေပြီး အသက်တွေကို ကယ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်မှာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲကတမျိုးဟာ ခွဲတဲ့နေရာအနီးအနားမှာ Adhesion ခေါ် တွယ်ကပ်မှုဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီလိုတွယ်ကပ်မှုဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အနာကျက်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်တာအပြင် ပိုးဝင်တာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနဲ့ ဓါတ်ကင်လို့လဲ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ဗိုက်၊ တင်ပါးဆုံတွင်းနဲ့ နှလုံးနေရာတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။
Pelvic adhesions တင်ပါးဆုံတွင်းမှာဖြစ်တာလဲ မနည်းပါ။ သားအိမ်။ သားအိမ်ပြွန်၊ မျိးဥအိမ်၊ ဆီးအိမ်တွေကြား တွယ်ကပ်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးတာနဲ့ သားအိမ်ထုတ်ရတာတွေကနေ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်တာအပြင် (PID) တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါတွေပိုးဝင်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အများဆုံးက လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ပြွန်မှာဖြစ်ရင် ကလေးမရတာအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
Heart adhesions နှလုံးမှာလဲ နှလုံးကိုဖုံးထားတဲ့ Pericardial sac အိတ်မှာတွယ်ကပ်မှုဖြစ်တတ်တယ်။ Rheumatic fever လေးဘက်နာအဖျားကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းလေးမှာစဖြစ်တယ်။ ဖြစ်လို့ခံစားရတာတွေကတော့ နှစ်နဲ့အထိကြာနိုင်တယ်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တာက အူပိတ်တာနဲ့ အစာလမ်းကို သွေးမလျှောက်တာတွေဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နေသူတွေမှာ အသဲအထက်မှာ ဖြစ်ရင် အသက်ရှူရင်နာမယ်။ အမျိုးသမီးမွေးလမ်းမှာဖြစ်ရင် အတူနေတာမှာ မနာသင့်ဘဲနာနိုင်တယ်။ နှလုံးမှာဖြစ်နေရင် ရင်ပတ်နာမယ်။ ဗိုက်အောင့်ရာ နာရာကနေ အန်ချင်တယ်။ အစာမကျေဖြစ်မယ်။
ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲအပေါ်မူတည်တယ်။ အနာသက်သာဆေး၊ ပိုးသေဆေးတွေ ပေးရတယ်။ လိုအပ်ရင်ခွဲစိတ်ပေးရတယ်။ Adhesions Surgery ခွဲငုနည်းမှာလဲ Laparoscopy ကိရိယာသုံးနည်းနဲ့ Laparotomy ဗိုက်ပြန်ဖွင့်နည်းရှိတယ်။
ဗိုက်ခွဲတိုင်း ကလေးမွေးတာဖြစ်ဖြစ်၊ အစာအိမ်ပေါက်တာဖြစ်ဖြစ် တခါခွဲရင်တခါ အထဲမှာ တွယ်ဆက်မှုလေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ခွဲလို့အနာဖြစ်ရာနေရာတိုင်းက မကျက်သေးခင် အနီးအနားက တစ်ရှူးတွေကို တွယ်ကပ်ကြတယ်။ အတန်းလိုက်တွေ၊ ပင့်ကူအိမ်လိုတွေဖြစ်တယ်။ ဒီအရာတွေကို နောက်တကြိမ်ခွဲရရင် ရှင်းပေးရတယ်။ တချို့ဆိုရင် ဗိုက်စဖွင့်တာနဲ့ ခွဲရာဟောင်းက အထဲကအင်္ဂါတွေတွယ်ကပ်နေတာကို အရင် ရှင်းရတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးရင် (ခီးမို့စ်)၊ (ခိုင်မရော) ဆိုတဲ့ဆေးတွေကို ပေးကြတာက ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့။ ဒါပေမဲ့ ထိရောက်မှုကိုတော့ ဆရာဝန်တွေ အမြင်မတူကြပါ။ တွယ်ကပ်မှုဖြစ်တာကလဲ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြဘူး။ ဒဏ်ရာရလို့ အမာရွတ် ထင်သူနဲ့ မထင်သူလိုမျိုး ကွာတယ်။
ဗိုက်ခွဲပြီးနောက်မှာ နာနေသေးသူတိုင်းတော့ အဲလိုမဖြစ်ပါ။ နာတာအတွက် အနာသက်သာဆေး သောက်သင့်ပါတယ်။ Paracetamol, Ibuprofen စတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိုသေးရင် Buscopan စားဆေးလဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကြာလေ သက်သာလေကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က မျှစ်ကို အတော်ကြိုက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကမျှစ်နဲ့ဝေးနေတာ ၂၈ နှစ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ရစဉ်က ထိုင်းကို ခဏခဏသွားခဲ့ရတာ အခေါက်တိုင်းမှာ မျှစ်ဝယ်ပြန်ပါတယ်။ မျှစ်စို့ကြီးတွေကို ကျောပိုးအိတ်မှာ နိုင်သလောက်ထည့်ပြီး သယ်လာပါတယ်။ ခတ္တမန္ဒူသွားတိုင်းတော့ မှိုဝယ်လာတယ်။ နယ်စပ်ရောက်တိုင်းလည်း မျှစ်ဝယ်ဖြစ်တာများတယ်။
မာနယ်ပလောခေါ်တဲ့ အတိုက်အခံမှန်သမျှရဲ့ဌာနချုပ်ကိုလည်း ၁၉၉၅ မတိုင်ခင်မှာ သုံးခေါက်ရောက်တယ်။ ဝါးတောထဲက ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ ဗုံးခိုကျင်းရှိတယ်။ ထမင်းစားရင် မျှစ်ဟင်းပါတယ်။
ဒေလီမှာနေစဉ်က ပုလဲကအသိတယောက် နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ကျနေတာ၊ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မျှစ်စိမ်းကပို့မရတော့ မျှစ်တွေကို သူကိုယ်တိုင် လှီးစိတ်ပြီး၊ မျှစ်ခြောက်လုပ်ထားသတဲ့။ အဆင်မသင့်ချင်တော့ ကျွန်တော်က နေရာတခုထပ်ပြောင်းရပြန်လို့ လက်ဆောင်က မရောက်နိုင်တော့ပါ။
မျှစ်ဆိုတာ ဝါး။ မုံရွာနဲ့ ပုလဲမှာလည်း မျှစ်ပေါပေါများများရတယ်။ စာထဲမှာသာဖတ်ရတဲ့ တပင်တိုင်ဝါးကို မသိပါ။ တပင်တိုင်မျှစ်လည်း မစားဖူးပါ။ မြန်မာစာအဖွဲ့ကနေ တစ်ပင်တိုင်အလုပ်ခိုင်းထားလို့ အဲသည်မျှစ်ကိုသာစားရရင် မျိုမကျလောက်။
၂ဝ၁၂ သြဂုတ်လထဲမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်သူ ၂ဝဝဝ ကျော်ကို အနက်ရောင် အမည်စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်တဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော့်နာမည်က နံပါတ် (၇) မှာပါခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူး။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖြူ-အမည်း သဲကွဲပြီလား။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆိုးဆေးနဲ့ နာမည်ကဖြူသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ဆံပင်ကတော့ စစ်အစိုးရတက်ကတည်းကဖြူခဲ့တာ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖြူ-အမည်း အခုထိ မသဲကွဲလှသေးပါ။
Big Name နာမည်ကြီး
Black and White အဖြူနဲ့ အမည်းပို့စ်အောက်မှာ ကွန်မင့်တခု ဖတ်ရတယ်။ ကျေးဇူး။
နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ နာမည်ကြီးစာရင်းထဲပါတဲ့သူ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အခုအထိ နာမည်ကြီးနေဒါပေါ့။
ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးရေးထားရင်၊ အသံကျယ်ကျယ်ဟစ်တတ်ရင်၊ သူများထက်ထူးခြားပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ရင် နာမည်ကြီးနိုင်တယ်။ Smile!
ကျွန်တော် အခုနေရတဲ့အရပ်မှာ မနှစ်က ဒီအချိန်မှာ သစ်ပင်လေးတွေ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီနေကြပြီ။ ဒီနှစ် စောင့်ရဦးမယ်။
မြန်မာစကားမှာ လေသွေးတယ်ဆိုတာ တော်တော်ရိုးပါတယ်။ နှင်းဆီ အဖူးအငုံလေးတွေကို လေသွေးလိုက်တော့ ဟိုယိမ်းဒီယိမ်းနဲ့ လုပ်လီလုပ်လဲ့ဖြစ်နေတာကို ခေတ်ဟောင်းတေးရေးပညာရှင်က သွေးကာချီ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီလို့ လှလှ ပပလေး ဖွဲ့နွဲ့ထားပါတယ်။ ဒါကို ခေတ်ပြန်ဆိုသူက ပွေ့ကာချီ ပွေ့ကာချီ ဖူးပွင့်ငုံ ဝေစီလုပ်ပစ်လိုက်တော့ ပျက်ရော။ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ မိန်းမပျိုကလေးရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ရာဂုမ္မတ္တကြီးတဦးက ပွေ့ချီသွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ မောင်သာနိုးက ရေးထားတာ။
ဆရာမောင်သာနိုးစာမူရင်းမှာ တဦးလို့သာရေးထားတာကို ကူးတင်သူကနေ တစ်ဦးလုပ်ထားတယ်။ အဲလိုတွေများနေလို့ မြန်မာစာ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီ ဖြစ်မလာနိုင်တာ။ အညွန့်ကိုတုံးစေအောင် လုပ်ထားတယ်။
ပို့စ်တခု တွေ့တယ်။ ခနလောက် စွန်းအသွားတယ်
ဒေါက်တာရှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိသည်က ရာသီသွေးလာရင် ဘာဖြစ်တက်ပါသလဲရှင့်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် သွေး၊ အရည်၊ အဖြူဆင်းတာ မကောင်း။ ကိုယ်ဝန် ပတ်-လ အပေါ်မှာမူတည်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း အမျိုးမျိုးရှိ။
3. Amenorrhea ရာသီထိန်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amenorrhea.html
4. Bleeding During Early Pregnancy ကိုယ်ဝန်နုစဉ် သွေးဆင်းခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-during-early-pregnancy.html
6. Ectopic Pregnancy (2) ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/ectopic-pregnancy.html
8. Miscarriage Prevention ကိုယ်ဝန်မပျက်အောင် http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/08/miscarriage-prevention.html
9. Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/miscarriage.html
10. Missed abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/missed-abortion.html
12. Pregnancy and Intrauterine Death (IUD) ကလေးအထဲမှာ သေဆုံးသွားခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-intrauterine-death-iud.html
13. Unfortunate Pregnancy ကံမကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/unfortunate-pregnancy.html
မမွေးမီသွေးဆင်းခြင်း ၂ မျိုးရှိ။
Placenta Previa အချင်း ရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/placenta-previa.html
ဘာဖြစ်တတ်လို့ ရေးရတယ်။ တက်ဆိုရင် တက်တာ၊ အတက်ရောဂါ။ ကိုယ်ဝန်မှာတက်တာကို သွေးဆိပ်တက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ PET ခေါ် မတက်မီအဆင့်နဲ့ Eclampsia ခေါ် တက်ခြင်းအဆင့်။ အဲဒီစာတွေ ဘလော့မှာ ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်။
PET ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/preeclampsia-pet.html
စာလုံးပေါင်းမှားရင် ရောဂါလည်းမှားတယ်။ ဆောရီး။ သတ်ပုံမှားလည်း နားလည်ရင်ပြီးတာဘဲ ဖြေလိုက်ပါလားလို့ပြောတာ ၄-၅ ယောက်ရှိပြီ။ အထင်နဲ့ ရမ်းဖြေခြင်းဟာ အသက် နှစ်ချောင်းကို အလောင်းအစားလုပ်ရာကျတယ်။
နှစ်ယောက်တွဲဖြေတာ ၁ မှတ်သာရ။ ကျ။ ဇောက်ထိုးကျ။
၁။ ဆရာရှင့် ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် သမီးသိချင်တာလေးဖြေပေးပါဦးဆရာ သမီး သားဦးကိုယ်ဝန် ၃၈ ပတ်ထဲမှာပါ အခု ဆီးသွားသလို အချွဲရည်တွေ ဆင်းနေလို့ပါဆရာရှင့် ဆေးရုံချက်ခြင်းတက်ဖို့ လိုပြီလားဆရာရှင့်
ပြသင့်။ ချက်ချင်းလို့ ရေးရ။
၂။ ဆရာရှင့်။ ကျမမောင်လေးရဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်း မေးမြန်းပေးချင်လို့ပါ။ သူကမြန်မာပြည့့် မြို့ကပါ။ အသက် ၃၂ နှစ်ပါ။ အမျိုးသား သက် ၃၂ နှစ်။ အခု သူတို့ရဲ့ သားဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတာ ၈ လပြည့်ဖို့ ၈ ရက်အလိုမှာ ရေမွှာရည် ဆင်းပါတယ်။ မိုးလင်းတာနဲ့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပါတယ်။ ထိုင့်း့ ဆေးရုံမှတဆင့့့် သို့ သွားရပါတယ်။ ညခင်း ၄ နာရီအထိ ဗိုက်နာခြင်း၊ ခါးနာခြင်းလဲမရှိ ကလေးကထွက်ခြင်သောကြောင့်တိုးနေပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းလဲ မပွင့်ပါဆရာ။ ပွင့်ဆေးထိုးပေးလဲ မပွင့်ပါဘူးဆရာ။ ကလေးက ၂့၎ ကီလို ရှိမယ်လို့ ဆရာမကခန့်မှန်းပါတယ်။ ဆရာဝန်များက ဆေးထိုးပေးပြီး နောက်ထပ် ၄၈ နာရီစောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကလေးကတော့ ယခင်ရက်ထက် ပိုလူပ်ရှားပါတယ်။ ဆရာဝန်များက လမစေ့သေးလို့ မနက်ဖြန်မှာ ပေါက်ထားတဲ့ ရေမွှာကို ပြန်ချုပ်ပေးပြီး လစေ့အောင် အိမ်ပြန်စောင့် ဒါမှမဟုတ် လမစေ့ပဲခွဲမွေးချင်မွေး မိမိတို့နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါကို ကျမတို့ နားမလည်လို့ပါဆရာ။ ဘာကိုရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ။ လမစေ့ပဲမွေးခဲ့ရင်ကလေးက ကျန်းမာရေးချူခြာတတ်တယ်လို့ အများစကားအရ သိရှိထားပါတယ်ဆရာ။ ပေါက်ထားတဲ့ရေမွာကိုပြန်ချုပ်ပြီး အိမ်ပြန်တလစောင့်ဆိုတာကလဲ စိုးရိမ်စရာရှိပါသလားဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာ။ (ချူချာလို့ ရေးရတယ်။)
ရေလို အရည်ဆင်းတာက ရေမြွာအိတ်ပေါက်လို့ဖြစ်တယ်။ ကလေးကို ဂရုစိုက်ရမယ်။ စိမ့်ပေါက်တာသာဆိုရင် စောင့်လို့ရတယ်။ ရေမြွာအိတ်ကိုချုပ်တယ်လို့တော့ မသိပါ။ သားအိမ်ဝမလုံသူကိုသာ ချုပ်ရတယ်။ ကလေးလှုပ်နေရင် ကောင်းတယ်။ ၃၇ ပတ်ထက်စောမွေးရင်တော့ ကလေးကို အထူးဂရုစိုက်ရတယ်။ Premature labor ကလေးစောမွေးခြင်းကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
ရေမြွာစောပေါက်ခြင်းဆိုတာ မမွေးခင်မှာ အရည်ဆင်းတယ်၊ အဝတ်ကိုစိုလာတယ်ဆိုရင် ရေမြွာအိတ်ပေါက်တာဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ဝန်အားလုံးရဲ့ ၃% မှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုတာရော ချက်ချင်းလုပ်ပေးရမှာပါရှိတယ်။
Premature rupture of membranes (PROM) ဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပါတ်နောက်မှာ ရေ-အရည် ဆင်းတာကို ခေါ်တယ်။ ဗိုက်မနာသေးဘူး။ သွေးလဲမဆင်းသေးဘူး။ Preterm premature rupture of membranes (PPROM) ဆိုတာ ၃၇ ပတ် မတိုင်ခင်အဲလိုဖြစ်တာ။ Spontaneous premature rupture of the membranes (SPROM) ဆိုတာ ပုံမှန်၊ ရေမြွာလည်းပေါက်မယ် မွေးဘို့လည်း ဖြစ်တာတယ်။
စောမွေးတာတွေရဲ့ ၈၅% မှာ ကလေးမကျန်းမာတာနဲ့ သေဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၃ဝ-၄ဝ% က PPROM ကနေ စောမွေးတာဖြစ်တယ်။ မွေးလမ်းကို လက်နဲ့စမ်းတာ မလုပ်ဘဲထားရတယ်။ ပေါက်တာသေချာဘို့ Speculum VE မွေးလမ်းထဲကိရိယာ ထည့်ကြည့်မယ်။ အရည်က အယ်လ်ကာလိုင်းဓါတ်ရှိတာကို Nitrazine paper နဲ့စမ်းနိုင်တယ်။ အာလ်ထွာဆောင်း ရိုက်နိုင်တယ်။ ရေမြွာရည်၊ ကလေးအသက်၊ အလေးချိန်၊ အနေအထား၊ စတာတွေကိုသိရမယ်။
ဟိုးခေတ်တုန်းကတော့ ပေါ်လစီကားတွေခေတ်စားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုထိမှတ်မိနေတာက အဖေနှင့်သားများတို့၊ ပါပီမတိုပေါ့။ ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်မီဒီယာကို အသုံးချခဲ့ကြတာတွေပါ။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေကို ပေါ်လစီဆိုတဲ့နာမည်တပ်လိုက်ကြတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ပေါ်လစီဇာတ်ကားတွေရှိတာပေါ့ဗျာ။ စသဖြင့် နမူနာရုပ်ရှင်အမည်တွေပါပေးထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဦးနုရေးတဲ့ လူထုအောင်သံရုပ်ရှင်ကို မြို့တကာ ရွာတရာ လမ်းတကာမှာ ပိတ်ကားထောင်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ အခမဲ့ပြခဲ့တယ်။ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကား။ အနည်းဆုံး ၅ ခါလောက်ကြည့်ဖူးတယ်။ ကလေးဆိုတော့ ကွန်မြူနစ်ကို မသိ။ ထမင်းကလည်း မာလိုက်တာဆိုတဲ့ သူပုန်ခေါင်းဆောင်ပြောတာပဲ စွဲနေတယ်။ Smile! ကျွန်တော်လည်း တောထဲမှာ ထမင်းမာတာ စားခဲ့ဖူးတယ်။ မာလို့ မျိုမကျ။ No Smile!
ကျွန်တော်ကတော့ ပေါ်လစီမြန်မာစာသတ်ပုံအကြောင်းတွေ ရေးနေတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာစရိုက်တာ။ အလွန်အောင်မြင်တယ်။ အခုထိ ရိုသေကျိုးနွံစွာ လိုက်နာကြတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော တစ်နေလို့ မျိုမကျ။
အသက်က 24 ပါ မိန်းကလေးပါဆရာ ညာဘက်သားအိမ်နားအောင့်အောင့်နေလို့ပါဆရာ
သားအိမ်ဆိုတာ တခုတည်းသာရှိတယ်။ သားအိမ်နှစ်ခွက ရှားတယ်။ သားအိမ်ရဲ့ ဘယ်ဘက် ညာဘက်လို့သာ ပြောရတယ်။ သားအိမ်ပြွန်နဲ့ မျိုးဥအိမ်တို့က တစုံရှိတယ်။ သားအိမ်ဝကလည်း တခုတည်း။
ဒီမေးခွန်းက အခုရတာ။ နမူနာသာဖြစ်တယ်။ အဲလိုရေးမေးသူတွေ မနည်းပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ တခုတည်းသာရှိတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း (ခေါင်း၊ နဖူး၊ မေး၊ လည်ပင်း၊ ရင်ပတ်၊ နောက်ကျော) ကို အဲလိုမှားပြောတတ်ကြတယ်။
နောက်အမှားတမျိုးက ရှေ့နဲ့ အရှေ့၊ နောက်နဲ့ အနောက်။ အဲဒီအကြောင်းလည်း ရေးထားတယ်။
1. Double Reproductive Organs အင်္ဂါနှစ်မျိုးပါနေခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/double-reproductive-organs.html
2. RV Uterus သားအိမ်နောက်လန် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/rv-uterus.html
3. Tilted uterus သားအိမ်စောင်းနေခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tilted-uterus.html
4. Uterus didelphys သားအိမ်နှစ်ခွ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/uterus-didelphys.html
5. Uterus သားအိမ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/uterus.html
6. အရှေ့အနောက် တောင်မြောက်ဘယ်မှာ မသိပါငြား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/blog-post_93.html
ဆရာက ပုလဲက ဒေါက်တာတင့်ဆွေဆိုရင် ဆရာ့အတွက် အလွမ်းပြေ ဆရာ့အိမ်ကို ဓာတ်ပုံရိုတ်ထားတာပို့ပေးလိုက်မယ် ဆရာ။ ကျွန်တော် ကြောင်သန်းကပါဆရာ။ ရန်ကုန်မှာ စက်မှုအင်ဂျင်နီအလုပ်နဲ့ လုပ်ပါတယ်ဆရာ။
ကိုယ့်မှာရှိခဲ့တာ အဲတာသာ။ အဲတာလည်း အိုဟောင်းပျက်စီးနေပြီ။ သစ်လွင်တောက်ပမှု ကင်းမဲ့ပြီ။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု ဆိတ်သုဉ်းပြီ။
ကိုယ့်မှသာ မဟုတ်။ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ သစ်လွင်တောက်ပမှုရော သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပါ ရှိခဲ့ကြတယ်။ တချို့မှာ တာရှည်ပြီး တချို့မှာ မကြာ။ ဖြစ်စဉ်သဘောကတော့ တူတယ်။
နုပျိုသစ်လွင်ချိန်မှာ အကျိုးရှိစေတာကို စွမ်းနိုင်သလောက် လုပ်ကြရတယ်။ အစွမ်းရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေး က အသက် ၁ နှစ်နဲ့ ၉လ ရှိပါပီကန်တော့ပါနော် ဆရာ ကျွန်မသားလေး ဝှေးစေ့ တလုံးက နဲနဲလေး ကြီးလာသလို ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ထဲ ထင်မိ၍ ကလေးဆေးရုံကို သွားပြခဲ့ပါတယ်မပြခင် ၅ ရက်လောက်က အိမ်မှာ သားလေး ဆော့နေရင်း ချော်လဲခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့လည်း သက်ဆိုင်မယ် ထင်သောကြောင့် ဆရာဝန်ကို အကျိုးအကြောင်း စုံလွင်စွာ ပြောပြပါတယ် ဆရာဝန်က သားသားလေး ဝှေးစေ့ကို စမ်းသပ်ပီး အရည်အိတ် ရှိနေတာလို့ ပြောပါတယ်ဆရာကလေး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ထပ်မံပြဆိုရန် ဆေးစာ ရေးပေးပါတယ်ဒီလို အရည်အိတ် ရှိခြင်းဟာ အန္တရာယ် ရှိမရှိနဲ့ အကယ်၍ ခွဲထုတ်လိုက်မည် ဆိုရင်ရော သားလေး ခံနိုင်ရည် ရှိ မရှိ သိလိုပါတယ်ဆရာခွဲထုတ်ပီးရင်ရော အရည်က ပြန်တည် လာနိုင်ပါသလားရှင်သားလေး အသက်ကြီးလာရင်ရော ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သလား သိချင်ပါတယ် ဆရာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့က ရက်ချိန်း မရောက်သေး၍ မပြရသေးလို့ပါရှင်သားလေးက ဆော့ချိန်/စားချိန်/အိပ်ချိန် အားလုံးပုံမှန်ပါ ရွှင်ရွှင်ပျပျလည်း ရှိပါတယ်ဒီလို အရည်အိတ် တည်ခြင်းဟာ ဘယ်လို ဂရုစိုက် ကာကွယ်မှု လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်လာရတယ် ဆိုတာလည်း သိလိုပါတယ်ဆရာရှင့်ဆရာ့၏ အကြံဥာဏ်နှင့် ကုသရန် နည်းလမ်းများ ရယူလိုပါ၍ ဆေးမှတ်တမ်းများ ပူးတွဲ၍ ပေးပို့ပါတယ်ရှင့်။ (အင်္ဂလိပ်လို ဒေါ့တွေကို ဖျက်လိုက်ရတယ်။)
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ မီးကိုယ်ဝန်နဲ့ထဲက ဆရာကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးဖူးပါတယ်ဆရာ။ ဖြေပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါတယ်ဆရာ။ 7.3.2016 မှာသားလေးကိုခွဲမွေးပါတယ်။ ကျမ္မာရေးလဲကောင်းပါတယ်။ အခုကလေးက ၁ လနဲ့ ၁၂ ရက်ပါဆရာ။ ကန်တော့ပါတယ်ဆရာ သားလေးကမွေးကထဲကသူ့ဂွေးစေ့ကကြီးနေတယ်ဆရာ။ ဒီတိုင်းထားလို့ အဆင်ပြေလား။ ဘာလုပ်သင့်လဲလို့ အားရင်ဆရာနည်းလမ်းလေးပြောပေးပါလား။ သားလေးပုံပါတင်ပေးလိုက်တယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာကိုမေးတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလည်း ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆရာတို့ မိသားစုအားလုံး ကိုယ်ကောစိတ်ပါ ကျမ္မာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာ။ (မီးကိုယ်ဝန်လို့ မရေးသင့်ပါ။)
၃။ ဆရာ ကျွန်မ တူလေးက ခု ၁ နှစ်နဲ့ ၁ လပါ။ ခု သူ့ရဲ့ ကပ္ပါယ်အိတ်လေးတဖက်က ဖောင်းနေပါတယ်။ ရေအိတ်လို့တော့ ပြောတယ်ဆရာ။ ကလေးကနာတဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါလေးစဖောင်းတယ်လို့သိသိချင်းမှာ ကိုယ်ပူပြီးတော့ တပတ်လောက်ဖျားတယ်။ ခုတလောကလေးကသိပ်မလန်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီ့ရေအိတ်ကို မခွဲပဲသက်သာမဲ့နည်း မရှိဘူးလားဆရာ။ ခုအသက်အရွယ်မှာခွဲရင် ကလေးခံနိုင်ပါ့မလားဆရာ။
၄။ ဆရာရှင့် ကျမသားလေးက အသက် ၁ နှစ်နဲ့ ၈ လပါ။ ကန်တော့ပါဆရာ သူရဲ့ဝှေးစေ့လေးက တလုံးတည်း ကြီးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်တတ်ပါသလားဆရာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ဖြေပေးပါအုံးရှင့်။ ပုံပါအတိုင်း ဖြစ်နေတာပါဆရာ။
မုတ်ရောဂါကို ဆေးစာမှာ Hydrocele ဟိုက်ဒရိုဆီးလ်ခေါ်တယ်။ Processus vaginalis နဲ့ Patent processus vaginalis လို့ အခေါ်မျိုးထပ်ရှိသေးသလို မြန်မာလိုလဲ မုတ်ရောဂါ၊ မုတ္တရောဂါ၊ (ကန်တော့ပါ) ဘောကြီးတာလို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ အဖြစ် အတော်များပါတယ်။ မွေးကလေးတွေမှာလဲ မနည်းလှပါ။ ကျွန်တော့် လက်ရှိဆေးခန်းလေးတခုမှာ တတ်သိပညာ မနေသာဆိုသလို ခွဲစိတ်တာလေးတွေ တတ်အားသမျှလုပ်ပေးပြီး (ကြွားချင်ချင်လဲ ရှိတာမို့) ဘလော့ခ်နဲ့ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပုံလေးတွေတင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းဝတ်စုံနဲ့ ခွဲနေတဲ့ပုံတွေ့တိုင်း အထင်တော် မကြီးကြပါနဲ့ ဆရာဝန်တိုင်း လက်တွေ့ ခွဲတာစိတ်တာလုပ်ရရင် ဒီရောဂါနဲ့ စကြရတာများတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ ဖိုင်မိုးဆစ်ခေါ်တဲ့ ပန်းငုံတာ နှစ်မျိုးက ခွဲရတာလွယ်လို့ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စရာတွေကလဲ စိုးရိမ်စရာနည်းတယ်။
ယောက်ျားအစိ ခေါ်တဲ့ တက်စတိစ် ဟာ သန္ဓေသားဘဝတုံးက ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာစဖြစ်လာပြီး မွေးကာနီးမှ ကပ်ပယ်အိတ်ခေါ် ဆခရိုတမ်ထဲ ဆင်းလာတယ်။ ဆင်းလမ်းပိတ်မသွားရင် အရည်အောင်းတာဖြစ်လာလို့ မုတ်ရောဂါဖြစ်စေတယ်။ ဟိုက်ဒရို ဆိုတာက ရေ ဖြစ်ပြီး ဆီးလ်ဆိုတာက အိတ်။ ရေအိတ်လို့ ပြောတာပါ။ အူကျတာနဲ့လဲ တချို့မှာ တွဲဖြစ်သေးတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေမှာဖြစ်ရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ အလိုလိုပျောက်ပါမယ်။
အသက်ရလာမှ ဖြစ်တာမျိုးက ကျားအစိကိုဖုံးပေးထားတဲ့အိတ်ထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ အရည်ပါးပါးလေးက ရှိသင့်တာထက် များမျာလာလို့ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ အဲလိုများလာလဲ မပြောတတ်ပါ။ ကျားအစေ့ နဲ့ အကြောရောင်ရမ်းရာကနေလဲ အရည်များပြီး ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
အမှောင်ခန်းထဲမှာ မီးပုလွေလို ပိုက်လေးတဖက်ကနေ ကြီးနေတဲ့မုတ်ကိုထောက်ထားပြီး မုတ်တဖက်ကနေ လက်နှိပ်မီး အလင်းရောင်ထိုးထားရင် အလင်းကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ အရည်ကကြည်နေလို့ပါ။ မကြည်ရင်တော့ တမျိုး ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆန်ဆေးရည်လိုလို၊ နွားနို့ရောင်လိုလို နောက်နေမယ်။ အလင်းရောင်ဖြတ်သန်းဘို့ခက်တယ်။ ကင်ဆာဆို အဲလိုနေမယ်။ နောက်ပြီး Wuchereria bancrofti or Brugia malayi ပိုးကနေဖြစ်ပြီး ခြင်ကတဆင့်ကူးတဲ့ ဆင်ခြေထောက်လိုရောဂါဖြစ်ရင်လဲ အဲလိုဘဲ။
ဖြစ်နေရင် အရွယ်အစားကြီးနေမယ်။ မနာဘူး။ အစိပါလိုက်ကြီးနေမယ်။ တဖက်ထဲရော နှစ်ဖက်လုံးပါဖြစ်နိုင်တယ်။ လူကို ဘာမှ အန္တရာယ်မပေးပါ။ ကြီးနေလို့ အနေရခက်မယ်။ သူများတွေက ပြောင်လှောင်မယ်။ အဝတ်အစား ခက်မယ်။ အုန်းသီး လောက်ကြီးလဲ မခွဲဘဲနေနိုင်ပါမယ်။
လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှာ ၁၉၉၈ ကတည်းက ကလေး ၁၇၄ ယောက်ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကလေးအားလုံးက ၁၈ လအရွယ်မှာ ကပ်ပယ်အိပ်ကြီးနေပြီး၊ ၁၆၈ ယောက်က ၁၂ ကတည်းကဖြစ်တယ်။ ၃၇ ပါတ်ထက် စောမွေးတဲ့ကလေးက ၃၂ ယောက်ပါတယ်။ ၁၁ ယောက်က ၃၂ ပါတ်နဲ့မွေးခဲ့တယ်။ ကလေး ၁၂ဝ မှာ ဘက်နှစ်ခုလုံးက ကြီးနေကြတယ်။
ကလေး ၁၁ဝ ကို စောင့်ကြည့်တယ်။ ၆၉ ယောက် (၆၂့၇%) က ပျမ်းမျှ ၁၁့၇ လမှာ ခွဲစိတ်တာမလုပ်ပဲ ပျောက်သွားကြတယ်။ ၄၁ ယောက် (၃၇့၃%) ကို ပျမ်းမျှ ၁၄ လမှာခွဲစိတ်ပေးရတယ်။ ခွဲရတာတွေက အရွယ်အစား ကြီးကြီးလာလို့နဲ့ အူကျတာပါတွဲနေလို့ဖြစ်တယ်။ ၆ ယောက်မှာ ဟာနီယာခေါ်တဲ့ အူကျတာပါတွဲနေတယ်။ အလိုလိုပျောက်တဲ့ကလေး ၂ ယောက်မှာ နောင်ကြတော့ အူကျတာနဲ့တွဲပြီး မုတ်ရောဂါပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ကလေး ၆၄ ယောက်မှာ ကြီးနေတဲ့မုတ်ရောဂါအရွယ်အစား သေးလာတာတွေ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အတော်အဖြစ်များတယ်။ ကျွန်တော် အထဲမှာနေရတုံးက ဒီရောဂါလူနာပေါင်း ဘယ်နှစ်ယောက်ခွဲခဲ့ရသလဲ ရေတွက်မထားပါ။ ရာဂဏန်းရှိနိုင်တယ်။ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်ဘာခွဲတာလဲ စပ်စုကြလို့ ဒီရောဂါကို ခဏခဏ ခွဲရဖန် များတာလဲသိလို့ ထပ်ပြီး ကန်တော့လိုပြောပါရစေ၊ လဥဆရာတဲ့။ လက်ဦးဆရာ၊ မည်ထိုက်စွာ၊ ပုဗ္ဗာစရိယ၊ မိနှင့်ဖ ဆိုတဲ့ အသုံးကိုယူပြီး ပြောကြတာပေါ့။
ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်းမှာ မခွဲတဲ့နည်းနဲ့ ခွဲနည်းရှိတယ်။ အမှန်က ခွဲမှသာ ပျောက်ပါမယ်။ မခွဲတဲ့နည်းတွေ စမ်းခဲ့ကြတယ်။ စုပ်ထုတ်တာက ခဏပဲ။ ထပ်ပြီးကြီးလာမယ်။ စုပ်ထုတ်ပြီး ဆေးတမျိုးမျိုး ဥပမာ အိုင်အိုဒင်းဆေး ထိုးထည့်ပေးနည်။ အရွယ်အစားမကြီးရင် ရတယ်။ ကြီးနေတာဆိုရင် ခွဲမှသာပျောက်တယ်။
ခွဲနည်းကို Hydrocelectomy ခေါ်တဲ့ အရည်ထွက်ရာပင်ရင်း အိတ်ကို ဖြတ်ထုတ်နည်းသုံးတယ်။ သမာရိုးကျနည်းက အရည်တွေကိုထွက်စေပြီး အရည်အိတ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ချုပ်ပေးတယ်။ အရည်ထွက်ရာ မျက်နှာပြင်က အပြင်မှာမို့ အရည်အောင်းစရာ အိတ်ရယ်လို့မရှိတော့ဘဲ ထွက်သမျှကို စုပ်ယူနေလို့ ထပ်မဖြစ်တော့ပါ။ အဲတာကို Radical cure အပြီးအပိုင်ကုသနည်းလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ခွဲစိတ်နည်းရဲ့ ပင်ရင်းနာမည်က ခပ်ဆန်းဆန်းမို့ စာမေးပွဲအတွက်သာ မှတ်ထားရတယ်။ Jaboulay procedure ကို ဂျပိုးလေးလို့သာ ပြောင်ခေါ်ကြတယ်။
စာအစမှာရေးခဲ့သလို မြန်မာပြည်မှာ အဖြစ်များတယ်ဆိုပေမဲ့ အိန္ဒိယကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေထဲမှာ ချင်းပြည်နယ်ကလာသူက ၉ဝ% ရှိတယ်။ သူတို့အထဲမှာတော့ မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေလောက် အဖြစ်မများတာ သတိထားမိတယ်။ ချင်းကလေးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးက Phimosis ပန်းငုံတာ။ ဗမာတွေထက် နှစ်ဆမက များတာ တွေ့ရတယ်။ ခပ်ဆန်းဆန်းဘဲ၊ ချင်းမွေးကာစ မိန်းကလေးတွေ Imperforate hymen ဗဂျိုင်းနား အပေါက်မပါတာလဲ ဒီမှာ များများတွေ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ် ကောက်ချက်ချတာ စိတ်မစောသင့်ပါ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ တွေ့တာတခုထဲကြည့်ပြီး ဒါက ဒီလိုဆိုလိုက်ရင် မမှန်ဘူး။ တခြားနေရာမှာ ဒါကဟိုလိုဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အတွေ့အကြုံများလေလေ ကောင်းလေလေ။ ဒေါင့်စုံကကြည့်နိုင်လေလေ အမှန်နဲ့ နီးစပ်လေ။ ပညာစုံ ကုံလုံပြည့်ဝကြပါစေ။